Vaovao - Antony azo itokisana 25 Nahoana ianao no tokony hifindra amin'ny jiro LED
1. Ny LED dia tena maharitra
Ny jiro LED sasany dia mety haharitra hatramin'ny 20 taona nefa tsy rava.
Eny, marina ny famakianao izany!
Ny fitaovana LED dia malaza amin'ny faharetany.
Amin'ny ankapobeny, ny jiro LED iray dia maharitra ~ 50,000 ora.
Izany dia avo 50 heny noho ny takamoa mirehitra ary avo efatra heny noho ny Compact Fluorescent Lights (CFLs) tsara indrindra.
Mahagaga, sa tsy izany?
Midika izany fa, miaraka amin'ny jiro LED, dia ho taona maro vao tsy maintsy mitady fanoloana na manova jiro mipetaka be.
2. Kely kokoa ny mety hisian'ny fahasimbana/fahapotehana
Tombontsoa iray hafa mahavariana amin'ny fampiasana jiro LED dia tsy mila manahy momba ny fahatapahan-jiro sy ny fahasimbana ianao.
Eny, tsy toy ny jiron'ny incandescent sy ny fantsona fluorescent, ny ankamaroan'ny fitaovana LED dia vita amin'ny plastika avo lenta, tsara amin'ny tontolo iainana.
Midika izany fa na dia narianao tsy nahy aza ny fitaovanao, dia mbola ho azonao ampiasaina mandritra ny taona maro ho avy.
Ary koa, noho ny faharetany, ny fifandraisana amin'ny jiro LED dia matetika kely.Noho izany, mampihena ny mety hisian'ny fahavoazana.
3. Tsy misy Mercury ny LED
Ny iray amin'ireo fahasahiranana lehibe indrindra amin'ny fampiasana CFLs, takamoa incandescent, halogen, ary fantsona fluorescent dia ny fisian'izy ireo fitaovana mampidi-doza.
Ary matetika ny merkiora no tena fahita amin'ireo akora mampidi-doza ireo.
Tsy vitan'ny hoe mampidi-doza ho an'ny fahasalaman'ny olombelona izany fa tena manimba ny tontolo iainana koa.
Na izany aza, miaraka amin'ny LED, mampanahy ny lasa izany.
Ny fitaovana LED dia tsy natao hanomezana traikefa amin'ny jiro tsara indrindra fa tsy misy mercury - na fitaovana mampidi-doza amin'izany.
Izany no mahatonga ny LED antsoina koa hoe Green Lighting Technology.
4. Mamelona/Efa avy hatrany.
Tsy halanao ve izany rehefa tsy maintsy miandry ny jiron'ny fluorescent ianao vao mirehitra?
Raha manao izany ianao dia manolotra safidy tsara kokoa ho anao ny LED.
Ny LED dia tsy mitselatra na mitaredretra alohan'ny hamonoana/famonoana.
Midika izany fa hanana jiro eo noho eo ianao isaky ny mila izany tsy misy fahatarana mahasosotra sy flicker mahatonga ny migraine.
Fanampin'izay, io no antony lehibe mahatonga ny jiro LED ho an'ny jiro raitra sy haingon-trano amin'ny sisin'ny tranobe any amin'ny tanàna lehibe.
5. Jiro bebe kokoa ho an'ny angovo kely kokoa
Raha nampiasa jiro incandescent ianao dia mety ho voamarikao fa ireo fitaovana ireo dia mamoaka 1300 lumens ho an'ny angovo 100 watts.
Ny Watt (W) dia singa fandrefesana ampiasaina handrefesana ny fanjifana herinaratra.Raha Lumens (lm) kosa dia singa handrefesana ny hazavana mivoaka
Ny fitaovana misy marika 50lm/W dia mamokatra hazavana 50 Lumens isaky ny angovo Watt ampiasaina.
Raha ny salan'isa incandescent amin'ny 13lm/W, ny salan'isa LED dia mahatratra 100lm/Watt.
Midika izany fa mahazo hazavana 800% bebe kokoa ianao miaraka amin'ny fitaovana LED.
Amin'ny ankapobeny, ny jiro mirehitra 100W dia mamokatra hazavana mitovy amin'ny jiro LED 13W.
Na amin'ny teny tsotra kokoa, ny LED dia mampiasa angovo 80% latsaka noho ny takamoa incandescent mba hamokarana hazavana mitovy.
6. Ny ankamaroan'ny LED dia manohana ny dimming
Mila hazavana manokana ve ianao?LED dimmable no valiny.
Ny dimming dia tombony lehibe iray hafa amin'ny fampiasana LED.
Tsy toy ny teknolojian'ny jiro hafa, dia mora ny manamaivana ny jiro LED.
Na izany aza, tokony homarihinao fa tsy ny LED rehetra no manohana ny dimming.Noho izany, ataovy azo antoka fa mahazo ny karazana LED mety ianao rehefa miantsena.
7. LED dia tsara ho an'ny lakozia sy ny vata fampangatsiahana
Zava-misy fantatra izany:
"Ny fluorescent dia ratsy amin'ny vokatra sy mora simba"
Eny, matetika ireo jiro ireo dia manafaingana ny fahasimban'ny vokatra sy ny voankazo vaovao.
Ary satria ny ankamaroantsika dia mitazona ny paoma, ny ovy, ny akondro, ny voatabia, ary ny zavatra simba hafa ao an-dakozia, ny jiro fluorescent dia mety hiteraka fahasimbana haingana izay mitarika ho amin'ny lo sy ny fahaverezana.
Ary izany no mahatonga anao hahita fa ny ankamaroan'ny vata fampangatsiahana dia misy jiro LED ao anatiny.
Ny LED dia tsy manome jiro avo lenta sy ampy fotsiny fa tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny voankazonao, ny vokatrao ary ny mety ho lo.
Midika izany fa mahazo mitsitsy vola ianao amin'ny fampidinana ny fanjifana herinaratra sy ny tahan'ny fahasimban'ny kalitaon'ny sakafo.
8. Mamonjy vola ny fampiasana jiro LED
Andao hiatrika izany:
Ny LED dia mitahiry ny volanao amin'ny fomba maro kokoa noho ny iray…
Azo lazaina fa io no tombony lehibe indrindra amin'izy rehetra.
Ankehitriny, mety manontany tena ianao;Ahoana?
Ho an'ny iray, ny LED dia mampiasa angovo 80% latsaka noho ny jiro incandescent.Midika izany fa, miaraka amin'ny LED, mety handany 80% latsaka amin'ny jiro ianao.
Tsy mampino, sa tsy izany?
Tombontsoa hafa mitsitsy koa ny faharetany.Ahoana?
Ny jiro mateza dia midika fa tsy mila manolo izany ianao mandritra ny fotoana maharitra.
Ao anatin'ny fe-potoana 50,000 ora, azonao atao ny mividy jiro LED iray mahomby na ~ 50 takamoa tsy mahomby.
Ataovy ny matematika…
Arakaraka ny hamaroan'ny takamoa fanoloana jiro LED no lehibe kokoa ny fitsitsiana.
9. Tsy misy taratra UV
Matetika tsy mahasalama ny fiposahan'ny taratra UV be loatra.
Ary na dia mametraka ny tsiny hatrany amin'ny masoandro aza izahay, ny ankamaroan'ny rafitra jiro nentim-paharazana dia mamoaka taratra UV, ohatra, ny jiro mirehitra.
Raha manana hoditra saro-pady na miloko marevaka ianao, dia mety hisy voka-dratsiny ateraky ny fiposahan'ny taratra UV - na avy amin'ny masoandro na ny rafitra jiro mahazatra.
Soa ihany, ny LED dia tsy mamoaka taratra UV - na taratra hafa momba izany.
Noho izany dia afaka mankafy jiro kalitao miaraka amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana ihany koa ianao.
10. Ny LED dia tena Eco-Friendly
Mety efa nandre izany indroa ianao:
Ny jiro LED dia maitso ary tena mahasarika ny tontolo iainana…
Marina ny renao!
Saingy, mety manontany tena ianao;Ahoana?
Raha izany no izy, ny LED dia azo ekena amin'ny fomba manaraka:
Tsy misy akora misy poizina ao anatin'izany ny merkiora sy ny phosphore.
Ny LED dia tsy mamoaka taratra UV.
Ireo fitaovana jiro ireo dia manana dian-tongotra karbona - na tsia.
Ny LED dia mampiasa angovo kely kokoa noho izany dia mampihena ny fitakiana herinaratra mitarika amin'ny famoahana entona avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra.
Farany, tsy mamoaka hafanana ireo jiro ireo.
11. Ny LED dia tena mandaitra ary tsy misy hafanana
Ny LED dia miavaka amin'ny tsy fandaniany angovo amin'ny hafanana.
Tsy toy ny jiro incandescent sy fluorescent izay mandany ny ankamaroan'ny heriny amin'ny endrika hafanana, ny LED dia mampiasa efa ho 100% ny angovo hamokarana hazavana.
Izany no mahatonga ny LED mampiasa angovo kely kokoa hamokarana hazavana bebe kokoa.
Noho izany dia heverina ho tena mahomby izy ireo.
Ankehitriny, ahoana izany zavatra tsara izany?
Ho an'ny fanombohana, ny LED dia manamaivana ny fandaniam-bola.
Ary koa, mandritra ny volana mafana, ny fampiasana jiro nentim-paharazana (takao incandescent, fluorescents, halogens) dia vao mainka miharatsy ny toe-javatra;tsy lazaina intsony fa mety tsy maintsy mandany vola bebe kokoa ianao mba hitazonana ny tranonao mangatsiaka sy mahazo aina.
Na izany aza, olana iray tsy mila mieritreritra momba ny jiro LED ianao.
Tsy mafana matetika izy ireo;Raha manao izany izy ireo dia tsy maintsy misy olana amin'ny wiring na tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy ny fitaovana.
12. Tsara kalitaon'ny hazavana
Jiro tsy miovaova, marin-toerana ary ampy…
Izany no azonao amin'ny jiro LED.
Tsy vitan'ny hoe mafana ny takamoa mirehitra fa mety ho may amin'ny fotoana rehetra.Raha ny fluorescents dia tsy maintsy hanome anao migraine noho ny flickering tsy an-kijanona.
Ny kalitaon'ny hazavana dia lafin-javatra lehibe tokony hodinihina.
Matetika izy io no mamaritra ny toerana hahatongavanao.Mazava ho azy fa raha toeram-piasana io, dia tsy maintsy tonga lafatra ny jiro mba hampitomboana ny vokatra.
Ny hoe manome hazavana bebe kokoa ny LED dia midika fa mila vitsivitsy fotsiny ianao mba hanazavana toerana lehibe.
13. Ny jiro LED dia tena azo ampifanarahana (mafana, mangatsiatsiaka ary antoandro)
Tombontsoa lehibe amin'ny jiro ihany koa ny fanitsiana.Mazava ho azy fa mila jiro azo amboarina mifanaraka amin'ny filanao ianao, sa tsy izany?
Raha eny, ny LED no tsara indrindra amin'izany.
Noho ny endrika tsy manam-paharoa, ny LED dia azo adika mba hanomezana hafanana, mangatsiatsiaka ary ny hafanan'ny hazavana amin'ny andro.
Amin'izany fomba izany, tsy vitan'ny hoe mampiasa ny mari-pana tsara indrindra ho anao ianao fa manana fotoana mora ihany koa mampifangaro ny hazavana amin'ny haingonao.
Izany angamba no tena antony nahatonga ny LED ho malaza amin'ny show-biz.Izy ireo dia ampiasaina mba hanomezana fampisehoana miloko mihoa-pampana.
14. Ny LED dia manana endrika tsara tarehy
Noho ny zava-misy fa ny jiro incandescent sy ny fluorescents dia vita amin'ny ampahany vera, dia sarotra ny mampino ny modely azy ireo amin'ny endrika maro.
Raha ny marina, ny jiro incandescent dia manana endrika mitovy amin'ny takamoa mahazatra.Tsy lazaina intsony ny ballast sy ny jiro lehibe amin'ny fluorescents.
Ary izany dia mametraka fetra be dia be amin'ny fomba ahafahanao mampifandray ny haingon-tranonao amin'ny jironao.
Tena mampalahelo, sa tsy izany?
Miaraka amin'ny jiro LED, na izany aza, ny famolavolana dia tsy olana.
Ireo fitaovana ireo dia tonga amin'ny endrika maro.Ary ny ampahany tsara indrindra dia ny mpanamboatra sasany manohana ny fanamboarana.
Amin'izany fomba izany dia afaka manana rafitra jiro mifanaraka tsara amin'ny haingon-tranonao ianao.
Ankoatra izany, ny jiro LED dia maivana ary mora karakaraina.
15. Ny LED dia tsara ho an'ny jiro mivantana
Light Emitting Diodes (LEDs) dia tari-dalana.
Izany no mahatonga ireo fitaovana ireo no tena tiana indrindra amin'ny toerana mila jiro.
Amin'ny ankapobeny, ny famolavolan'izy ireo dia mamela azy ireo hampifantoka ny tara-pahazavana amin'ny lalana voafaritra.Zava-misy izay mahatonga ny fampiasana ny reflectors volafotsy tena tsy ilaina.
Noho izany, tsy vitan'ny hoe mankafy ny kalitaon'ny jiro mizotra ianao fa ny jironao ihany koa dia hameno mora ny fomba sy ny haingo.
Fanampin'izay, ny fahazoana jiro mivantana miaraka amin'ny LED dia midika fa tsy handany toerana tsy misy ilàna azy ny jiro angovo.
16. Fialam-boly tsy misy tabataba
Raha efa nampiasa jiro fluorescent ianao, dia fantatrao fa mirefodrefotra izy ireo rehefa mirehitra.
Ho an'ny sasany dia mety ho tsinontsinona izany tabataba izany.
Na izany aza, mety hanelingelina ny olona miezaka mifantoka amin'ny zavatra iray izany, ohatra, miezaka mamaky ao amin'ny tranomboky mirehitra miaraka amin'ny jiron'ny fluorescent maro.
Mety hanelingelina izany, sa tsy izany?
Eny, tsy mitabataba na manao tabataba ny LED.
Ireo fitaovana ireo dia mangina toy ny rano mangina.Ary ny fahazoanao jiro avo lenta sy toerana miasa mangina dia midika fa afaka mampitombo mora foana ny vokatrao ianao.
17. Fanohanana maro loko
Ny fanohanan'ny loko maro dia endri-javatra miavaka iray hafa mampiavaka ny LED amin'ny teknolojian'ny jiro hafa.
Tsy toy ny takamoa incandescent sy ny fantsona fluorescent izay mila sary hoso-doko ivelany fotsiny mba hahazoana loko hafa, ny LED dia azo adika mba hanaovana izany mora foana.
Cool, sa tsy izany?
Amin'ny ankapobeny, ny jiro LED dia manolotra loko isan-karazany an-tapitrisany.
Ary, vao nanomboka nikaroka ny mety hisian'ny lokon'ny LED izahay.
Tsy lazaina intsony hoe firy ny loko ho azontsika avy amin'ny jiro LED.
18. Ny LED dia tena azo ampiharina
Tena azo ampiharina satria azonao ampiasaina amin'ny zavatra rehetra.
Alaivo sary an-tsaina ity:
Miaraka amin'ny diode mirefy 1mm eo ho eo ny sakany - ary mbola mihakely kokoa rehefa mandroso ny teknolojia - misy toerana an-jatony maro ahafahanao mampiasa LED sy faritra fampiharana.
Amin'ny ankapobeny, ny kely kokoa ny diodes mahazo, ny lehibe kokoa ny mety ho fampiharana vaovao.
Ary nahoana ny mpanamboatra no mifaninana amin'ny famolavolana ny diodes kely indrindra, azo antoka fa manana zavatra be dia be ny andrandraina amin'ity indostrian'ny throbbing ity.
19. Famolavolana tsy misy fetra
Ny diodes bitika dia tena mora ho an'ny mpamorona sy mpanamboatra hamorona endrika, endrika ary habe amin'ny fitaovana LED.
Ny maha-kely azy ireo dia midika fa afaka mifanentana na aiza na aiza.
Noho izany, mamorona efitrano midadasika ho an'ny hevitra malefaka momba ny famolavolana, ny habeny ary ny endriky ny fitaovana LED.
Ny LED dia tsy manolotra jiro avo lenta ihany fa noho ny lanjany maivana ihany koa, afaka manana rafitra jiro lehibe sy haingon-trano ianao nefa tsy mila manahy ny amin'ny fianjerany.
Izay mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ny jiro mihantona.
20. Ny LED dia mety tsara ho an'ny toerana / olona manana herinaratra voafetra
Satria mahomby amin'ny angovo sy ny rehetra, ny LED dia safidy jiro tsara ho an'ny olona izay mbola tsy mahazo herinaratra azo antoka sy mora.
Tsy mandany angovo betsaka ireo fitaovana ireo ary noho izany dia afaka miasa tsara amin'ny rafi-masoandro sy ny bateria.
Mahavariana ve ianao?Eny, misy bebe kokoa…
LEDs angovo-efficiency midika koa fa afaka mampiasa azy ireo ho an'ny haingon-trano tanjona;toy ny Wallpaper LED izay manova ny endriny ho azy na rehefa mila zavatra vaovao ianao.
Ny LED koa dia ampiasaina amin'ny lamaody sy ny fomba ankehitriny.
Miaraka amin'ny LED, tsy voafetra amin'ny jiro fotsiny isika.Tsia!
Azonao atao ny mampiasa ity teknolojia maivana ity amin'ny indostria hafa ary mbola mahatratra vokatra mahatalanjona.
Ny LED dia nanimba ny fetran'ny famoronana, ny jiro ary ny haingo raha ny momba ny jiro.
21. Ny LED dia tsy mety amin'ny andro mangatsiaka
Ny andro mangatsiaka dia olana lehibe amin'ny jiro ivelany.
Raha ny marina, ny ankamaroan'ny rafitra jiro nentim-paharazana dia matetika tsy mandeha rehefa mangatsiaka loatra.Ary na dia manao izany aza izy ireo, dia tsy afaka miantehitra amin'izy ireo hanao tsara indrindra ianao.
Na izany aza, mifanohitra tanteraka amin'ny jiro LED…
Eny ary, ny jiro LED dia mahatohitra mangatsiaka.Ary tsy ny antsasany akory izany.
Rehefa mihamangatsiaka ny andro, ny fitaovana LED matetika dia miasa tsara kokoa.
Misy ifandraisany amin'ny famolavolana sy ny fizotran'ny fahazavana izany.
Amin'ny lafiny iray… Mety ho fatiantoka ihany koa izany.
Raha jerena fa tsy miteraka hafanana ny LED, ny fampiasana azy ireo any ivelany dia midika fa tsy ho afaka hiempo ny ranomandry mandrakotra azy ireo fitaovana.
Noho izany, tsy tokony hampiasa LED ianao amin'ny tontolo ivelany izay misy lanezy be;indrindra raha ny jiro no ampiasaina hampita vaovao manan-danja ohatra ny jiro fifamoivoizana.
22. Tsy miovaova
Ny ankamaroan'ny rafitra jiro matetika dia very ny hamafin'ny hazavana rehefa mandeha ny fotoana.
Ary rehefa mampiasa takamoa mirehitra ianao, dia tsy ho fantatrao mihitsy hoe rahoviana no hanantena fa ho may.Ataon’izy ireo tampoka fotsiny izany.
Ny LED no hany fitaovana jiro izay miantoka hatrany ny tsy fitoviana.
Manomboka amin'ny fotoana hamoahanao azy io ka hampidiranao azy ao amin'ny faladia-jiro ka hatramin'ny andro hahatratrarany ny naoty mandritra ny androm-piainany (oh 50,000 ora), ny fitaovana LED dia hanome anao hazavana mitovy.
Marina fa ny LED dia miharatsy ihany koa amin'ny hamafin'ny hazavana.Saingy matetika izany dia rehefa mahatratra ny androm-piainany.
Raha vantany vao ampiasaina ny fitaovana mandritra ny vanim-potoana voafaritra, dia matetika manomboka tsy mahomby ny diodes sasany.Ary amin'ny tsy fahombiazana tsirairay dia miteraka fihenam-bidy ny habetsaky ny hazavana vokarin'ny fixture.
23. Ny LED dia azo averina matetika
Eny, marina ny famakianao izany.
Azonao atao ny manodina ny LED rehefa may tanteraka izy ireo.
Ny jiro LED dia amboarina amin'ny fitaovana azo averina izay tsy manimba na misy poizina amin'ny fomba rehetra.
Ary izany no mahatonga ny jiro LED ara-barotra mahazo traction haingana.
Tokony homarihinao ihany koa fa mora kokoa noho ny fanariana ny fanodinana.
Midika izany fa mahazo mitahiry vola bebe kokoa ianao amin'ny dingana.
24. Ny jiro LED dia manome fiarovana tsara kokoa
Manontany tena angamba ianao;Ahoana?
Tsotra ihany, raha ny marina.
Matetika ny ankamaroantsika dia mamono ny jiro fiarovana mba hampihenana ny fandaniana.Ary eny, fihetsika marani-tsaina izany.
Tsy ilaina koa izany.
Raha tokony hamono ny jiro ianao dia afaka mivadika amin'ny jiro LED.
Ankehitriny, ny LED dia manatsara ny fiarovana ny tranonao amin'ny fomba roa:
Azonao atao ny mamela ny jiro fiarovana ivelan'ny tranonao tsy mila manahy momba ny fahazoana volavolan-dalàna goavana amin'ny faran'ny volana.
Na, azonao atao ny mampiasa jiro LED mahatsikaritra mihetsika izay mirehitra eo no ho eo rehefa mahatsapa karazana fihetsiketsehana.Amin'izany fomba izany dia ho hitanao ny fisian'ny mpanafika ho avy ary miaraka amin'izay koa, mampihena be ny faktioran'ny angovoo amin'ny jiro.
Mazava ho azy, miaraka amin'ny LED, dia vokatra mandresy na tsy manapa-kevitra ny hamela ny jiro fiarovanao ianao.
25. Nidina ny vidin'ny LED tato anatin'ny taona vitsivitsy
Farany, lasa mora kokoa ny LED isan'andro.
Noho izany, inona no fialan-tsiny anananao amin'ny tsy fampiasana azy ireo?
Tsy toy ny tamin'ny voalohany, raha vaovao ny jiro LED teny an-tsena ka lafo, ankehitriny dia nitombo ny famatsiana;ary niaraka tamin'izany dia nihena ny vidiny.
Ny vola lany voalohany dia notarihin'ny lafin-javatra vitsivitsy ao anatin'izany:
Ny tombony tsy tambo isaina amin'ny fampiasana jiro LED.
Famatsiana ambany vs. fitakiana be.
Faharetana sy fandaniam-bola.
Fanampin'izany, teknolojia somary vaovao izany.
Amin'izao fotoana izao, afaka mahazo fitaovana LED avo lenta sy tsara indrindra ianao amin'ny latsaky ny $10.
Midika izany fa na dia toerana ara-barotra lehibe aza dia azo havaozina amin'ny jiro LED nefa tsy mandany vola.
Manana izany ianao - antony tsara 25 mahatonga ny fampiasana jiro LED ho malaza kokoa.
Fotoana fandefasana: May-27-2021